Dhakhaatiir u Dhalatay Yamen oo soo gaaray magaalada Bosaso+SAWIRO – SBC
Dhakhaatiir u Dhalatay Yamen oo soo gaaray magaalada Bosaso+SAWIRO
Waxaa maantay kasoodegay garoonka diyaaradaha magaalada Bosaso dhakaatiir u dhalatay wadanka yamen ku waasoo howla caafimaad ka fulindoona cisbataalka jaamacada Bariga Africa ee Bosaso.
Imaansha dhakhaatiirtan ayaa waxaa masuulka ka ahaa Cisbatalka jaamacada Bariga Africa ee Manhal hospital”dhakhaatiirta reer yamen ayaa kasocday jaamacda kutaal wadanka yamen oo lagu magacaabo jaamacatul culuum kuwaasoo ay tiradoodu ahayd sadex dhakhtar oo lagukalamagacaabo Dr. Fadli Cali ,Dr. Amiin Cabdul waxid iyo Dr. C/siis Murshad.
Dr. Yiisif C/siis oo kamida maamulka cisbataalka jaamacada Bariga Africa ayaa kawarbixiyay safarka dhakhaatiirtan xiligi ay kasoo degayeen garoonka diyaaradaha magaalada Bosao wuxuuna sheegay in ay dhakhaatiirtan ay kayimaadeen wadanka yamen una yimaadeen Bosaso in howla caafimaad kafuliyaan cisbataalka jaamacada kuwaasoo isugu jira qaliino iyo baaritaano kala duwan iyo waliba ayagoo booqanaya jaamacada Bariga africa gaar ahaan qaybta caafimaadka.
dhakhaatiirta ayaa fulindoona qaliino ay kamid yihiin qaliinka xameetida iyo dhakhtar qaabilsan cudurada ku dhaca sanka,cunaha iyo dhagaha (ENT) sidookale dr yuusuf ayaa sheegay in ay ayaguna imaandoonaan dhakhaatiirkale oo kamidyihiin dhakhaatiir qaabilsan Indhaha iyo Neerfaha.
Dr. Fadli Cali oo asna saxaafada kulahadlay markii ay garoonka diyaaradaha kasoodegeen ayaa sheegay in ay aad ugu faraxsanyihiin imaantinka ay ku yimaadeen puntlan ayna tahay markoodii ugu horaysay oo ay yimaadeen puntland ayagoona sheegay in ay howlaha ay u yimaadeen in ay tahay howla caafimaad oo ay kafulin doonaan cisbataalka manhal ee jaamacada Bariga Africa iyo sidookale booqasha ay uyimaadenn islajaamacada gaar ahaan qaybta caagimaadka.
dhakhaatiirtan ayaa lagu wadaa in ay sitoos ah u wa hoolgalidoonaan cisbataalka manhal hospital oo ay leedahay jaamacada Bariga Africa aya doona ay qaybtoodakalena ay maalmaha soosocda soogaaridoonan magaalada Bosaso.
Dhaqaatiirtii Soo degtay ee Yemen oo Is Agtaagan.
Dhaqaatiirta iyo Dadkaloo shacab ah oo ku soo lugeynaya Ranweyga Garoonka diyaaradaha loogaga soo dego.
Maamulka Isbitalka Manhal ee Jaamacaha Bariga Africa oo u waramaya saxaafada.
Fadli Cabdul waaxid oo ka mid ahaa dhaqaatiirtii soo degtay oo Saxaafada la hadlay.